China High Standard Fast Chinja Thyristor fekitari uye bhizimisi | Runau Electronics
Kurumidza Shandura Thyristor (yakakwira standard YC akateedzera)
Iyo GE yekugadzira standard uye yekugadzira tekinoroji yakaunzwa uye ikashandiswa neRUNAU Electronics kubvira 1980s. Iyo yakazara yekugadzira uye yekuyedza mamiriro anga achienderana zvizere nezvinodiwa zveUSA musika chinodiwa. Sezvo piyona wekugadzira thyristor muChina, RUNAU Electronics yakanga yapa hunyanzvi hwehurumende magetsi emagetsi zvigadzirwa kuUSA, nyika dzeEurope uye vashandisi vepasirese. Iyo inonyatsokwanisa uye yakarongedzwa nevatengi uye mamwe mahombe mahombe uye kukosha kwakagadzirirwa vabatiri.
Iyo thyristor chip inogadzirwa neRUNAU Electronics is sintered alloying tekinoroji yakashandiswa. Iyo silicon uye molybdenum wafer yaive sintered yekukwirisa neiyo pure aluminium (99.999%) pasi peyakakura vharuvhu uye yakakwirira tembiricha nharaunda. Iyo manejimendi yeanopisa hunhu ndicho chinhu chakakosha kukanganisa hunhu hwe thyristor. Iyo yekuziva-kweiyo RUNAU Electronics mukuwedzera kubata iyo chiwanikwa junction kudzika, pamusoro flatness, chiwanikwa mhango pamwe izere nehunyanzvi hwekuparadzira, mhete denderedzwa pateni, yakakosha gedhi chimiro. Zvakare iko kwekugadziriswa kwakakosha kwakashandiswa kudzora hupenyu hweanotakura hwechigadzirwa, kuti iyo yemukati yekutakurisa yekumhanyisa kumhanya iwedzere kukurumidza, iyo yekudzosera yekudzosa chirahwe cheiyo mudziyo yakaderedzwa, uye switching yekumhanyisa inovandudzwa zvichidaro. Izvi zviyero zvakashandiswa kugadzirisa nekukurumidza kushandura hunhu, pa - mamiriro mamiriro, uye kuwedzera zvivakwa zvazvino. Iko kuita uye kuitisa mashandiro e thyristor ndeyechokwadi uye inoshanda.
Nekuomesa kudzora kwekubata uye kuenzanisa kwemolybdenum wafer uye yekunze pasuru, iyo chip uye molybdenum wafer ichave yakabatanidzwa neyekunze package zvakanyanya uye zvakakwana. Izvi zvinowedzera kukwikwidza kwekuwedzera kwerazvino uye yakakwira ipfupi redunhu razvino. Uye kuyerwa kweelectron evaporation tekinoroji kwakashandiswa kugadzira gobvu realuminium firimu pane yesilic wafer pamusoro, uye ruthenium dura rakafukidzwa pane molybdenum pamusoro ichawedzera kupisa kwekuneta kuramba zvakanyanya, iro basa rehupenyu nguva yekukurumidza switch thyristor ichawedzerwa zvakanyanya.
Kurumidza chinja thyristor ine alloy mhando chip inogadzirwa neRUNAU Electronics inokwanisa kupa izvo zvakakwana zvigadzirwa zveU.SA standard.
V / A. tq
Voltage inosvika 1600V
YC476 380 55 1200 ~ 1600 5320 1.4 × 105 2.90 1500 30 125 0.054 0.010 10 0.08 T2A
YC448 700 55 1200 ~ 1600 8400 3.5 × 105 2.90 2000 35 125 0.039 0.008 15 0.26 T5C
YC712 1000 55 1600 ~ 2000 14000 9.8 × 105 2.20 3000 55 125 0.022 0.005 25 0.46 T8C
YC770 2619 55 1600 ~ 2000 31400 4.9 × 106 1.55 2000 70 125 0.011 0.003 35 1.5 T13D
Pashure: Yakakwira Frequency Thyristor
Zvadaro: Kurumidza Shandura Thyristor